ရင်သွေးလေးကို သမီးလေးပိုလိုချင်တဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင် - Popular
အဆိုတော်စန္ဒီမြင့်လွင်က အနုပညာ အလုပ်တွေ လုပ်ရင်း တစ်ဖက်ကလည်း ညီအစ်မ ၄ ယောက်ဖွင့်လှစ်တဲ့ မင်းသမီးပိုးထည်တိုက်ကိုလည်း လုပ်ကိုင် လျက်ရှိပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ကိုသီဟလွင်နဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်တို့ ဇနီး မောင်နှံနှစ်ယောက်က ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ အိမ်ထောင် ရေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားပြီး သားသမီးရတနာလေး ယူဖို့လည်း စဉ်းစားနေကြပါပြီ။ ရင်သွေးလေးရလာခဲ့ရင် သမီးလေးကို ပိုလိုချင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်ကတော့. . .
”ကလေးယူတော့မှာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ် ကံနဲ့ ကံစပ်တဲ့အချိန်ရမှာပေါ့။ ဒီးဒီကတော့ သမီးလေး လိုချင်တာပေါ့။ သမီးလေးပဲ လိုချင်တာက ကိုယ်ကလည်း သမီးဆိုတော့ အမေနားကပ်တယ်လေ။ သမီးလေးဆို ဘယ်လိုလှအောင်ထားမယ်၊ ဘယ်လိုလှအောင်ဆင်မယ်၊ Train မယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားထားတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သားလေးဖြစ်လည်း ချစ်မှာပဲ။ သားလေးဖြစ်ဖြစ်၊ သမီးလေးဖြစ်ဖြစ် အဲဒီအချိန်ကျရင် သားသမီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ချစ်မှာပါပဲ”လို့ ပြောပါတယ်။
ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုသီဟလွင်ကလည်း သူ့အလုပ်နဲ့သူ ကြိုးစားသလို စန္ဒီမြင့်လွင်ကလည်း အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ရင်း မိသားစုရှေ့ရေးအတွက် ကြိုးစားနေကြသူတွေပါ။ အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်ပေမယ့် ပြောင်းလဲမှုတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်က . . .
”ခင်ပွန်းအတွက် အိမ်ထောင်သည်ကြီးလို ထွေထွေထူးထူး မလုပ်ပေးဖြစ်ဘူး။ သူလည်း လူငယ်၊ ကိုယ်လည်းလူငယ်ဆို တော့လေ သူ့အတွက်ထမင်းဟင်းတွေ ချက်ပေးတာလည်းမရှိဘူး။ သူလည်း သူ့အလုပ်သူလုပ်တယ်။ ကိုယ်လည်း ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ပြီး ကြိုးစားနေကြတာပေါ့။ အိမ်ထောင်ကျသွားပေမယ့် သိပ်မပြောင်းလဲသေးဘူး။ ကလေးမွေးမှပဲ ပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့” လို့ ပြောပါတယ်။